Hacker ဖြစ်ချင်သလား ? | Myanmar Black Hacking
0 Hacker ဖြစ်ချင်သလား ?
Hacker လို့ ပြော လိုက် တာနဲ့ ကျွန်တော် တို့စဉ်းစားမိတာက အွန်လိုင်းပေါ်က ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာ တွေ ကို ပါ ။ ဒီနေရာ မှာ အယူ အဆ နဲနဲ ပြင်ပေးချင်တာ က မကောင်းတဲ့ ဟက်ကာတွေရှိနေသလို ၊ကောင်းမွန်တဲ့ ဘက် က ရပ်တည် တဲ့ ဟက်ကာတွေလဲ ရှိနေပါတယ် ဆိုတာ ပါ ပဲ။ ဟက်ကာ ကောင်းတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကတော့ မိမိတတ်ထားတဲ့ ပညာတွေနဲ့ လုံခြုံရေးတွေစီစဉ်လုပ်ဆောင်မယ်၊ open source ဆော့ဝဲလ်တွေရေးမယ် နောက်မျှဝေမယ်၊ စစ်မှန်တဲ့ အဖြူရောင် ဟက်ကာ တို့ရဲ့ဘဝတွေကို သိက္ခာရှိရှိနဲ့ ထိမ်းသိမ်းသွားမယ် ဆိုတာတွေပါ ။ဒါပေမဲ့ အဆိုးရှိမှ အကောင်းဖြစ်ထွန်းလာမှာ ပါ ။ အပြိုင်ဆိုင်ရှိမှ တိုးတက်လာ မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဖြူရောင် ဟက်ကာ တွေရှိသလို အနက်ရောင် ဟက်ကာ တွေ လဲ ရှိမှ တိုးတက်မှု မြန်ဆန် မှာပါ ၊၊ အဲတော့ ဆိုးတယ် ကောင်းတယ် လို့ ခွဲခြားနေတာ ထက် ဟက်ကာ ဆို တာ အားကျလောက်စရာ ပညာရှင်လို့သတ်မှတ်လိုက်ကြပါစို့။Hacker ဖြစ်လာနိုင်ဘို့လမ်းကြောင်းများ(1) Learning ဆိုတဲ့ လေ့လာမှုသာမန်ထက်အားကောင်းရမယ်။(2) Java လို software တွေနဲ့ program တွေရေးနိုင်ရမယ်။(3) Html code တွေကို ကောင်းကောင်းဖတ်တတ်နေရမယ်၊ ကိုင်တိုင်ရေးတတ်ရမယ်၊ ပြင်ဆင်နိုင်ရမယ်။(4) Open Source ဆိုတာကို နားလည်ရမယ် ၊ဝင်ရောက်ရေးသားရမယ်။(5) Operating System ကို အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်တတ်ရမယ်။(6)Hacker တစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိမ်းသိမ်းနိုင်ရပါမယ်။
ဒီအချက် တွေကတော့ သင့်ကို hacker ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေဘို့ ဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။
(1)လေ့လာမှု သာမာန်ထက်အားကောင်းရမယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပြောချင်တာက ဇွဲ၊ လုံလတွေမှာ သူမတူအောင်ကောင်းရပါမယ်။ပင်ပန်းခံရပါမယ် ။ဟုတ်တယ်လေ ဒါက ဟက်ကာလမ်း ကြောင်းကိုးဗျ။ သင့်မှာ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် PC တစ်လုံး ရှိနေရပါမယ် ။အွန်လိုင်းဆို တာ လေ့လာ လို့ မကုန်နိုင်တဲ့ နေရာကြီး တစ်ခု ဖြစ်နေတာကိုးးးဗျ။နောက်ပြီး တွေးခေါ် မြော်မြင်တတ်တဲ့ ဥာဏ်အမြော်အမြင် တစ်စုံ ရှိနေဖို့လဲ လိုပါတယ် ။ဒါကတော့လေ့ကျင့်ယူလို့ ရနိုင်ပါတယ် ဘယ်အရာမ ဆို စိတ်ဝင်စား အလေးနက်ထားလိုက်ရင် စဉ်းစားနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
(2) Java လို ဆော့ဝဲလ်မျိုးတွေနဲ့ program တွေရေးတတ်ရမယ် ၊
ဒီအချက် သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ် ပရိုဂရမ်တွေအလုပ်လုပ်ပုံကို လေ့လာရပါမယ်။သင်သိထားတာတွေကိုကိုယ်ပိုင်ရေးနိုင်ရပါမယ် ။စူးရှတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံက နေရာတကာ လေ့လာနေရမှာ ဖြစ်သလို ပြန်လည်ရေးဆွဲနိုင်တဲ့ ပရိုဂရမ်မာလဲ ဖြစ်နေသင့်တာပေါ့ ။
(3)HTML code တွေကို ရေးနိုင် ဖတ်နိုင်ရမယ် ။
သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင် website တွေရှိ်နေရပါမယ် ။ ဆိုလိုချင်တာကHtml code တွေ ကို အသုံးချပြီးကိုင်ပိုင် web page၊ blog၊ website တွေ ရှိနေရပါမယ် ။HTML ဆို တာ က တော့ web ဘာသာရပ် တခုလို့ ပြောရမဲ့ အရာ တခုပါ ။ web မှန်ရင် HTML နဲ့ မလွတ်ကင်းတဲ့ အတွက် ဒီပညာကို တတ်ထားမှ web developer ဖြစ်လာနိုင်သလို hacker တယောက်ရဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို လဲ ခြေ ချနိုင်မှာ ဖြစိပါတယ်။
(4)Open Source တွေမှာ ဝင်ရေးရမယ်
Open Source ဆိုတာက တော့ softwareတခု ကို စတင်ရေး သားလိုက်တဲ့ မူလပိုင်ရှင် software developer ဟာ မိမိ software ကို လူပုံ အလယ်မှာ ချပြပြီး ၊ အလကားပေးပါတယ် ကြိုက်ရင် ယူသုံးပါ ကောင်းနိုးရာရာတွေကို လဲ ဖြည့်စွက်ပါ ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဥပမာ ပြောရရင် သင်လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ Firefox browser ဟာလဲ open source တစ်ခုပါပဲ။သူ့ကိုကြည့်မယ် ဆိုရင် မူရင်းပိုင်ရှင် ဟာ open source အဖြစ် ပေးထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် web ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ပညာရှင်တွေ က ဝိုင်းဝန်း ပြီး add on လို ဟာမျိုးတွေ ဖြည့်စွက်ကြတဲ့ အတွက် အအောင်မြင်ဆုံး Browser အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတာပါ ။သင်ကိုယ်တိုင် Open source တွေကို လေ့လာရမယ် ဝင်ရေးရပါမယ်။
(5)Operating System ကို သင့်တော်အောင်ရွေးချယ် တတ်ရပါမယ်။
Hacker လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ပြီ ၊ Open Source ကို သင်ရွေးချယ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ အသုံးပြုသင်တဲ့ OS ဟာ linux လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် ။ သူဟာလဲ open source OS တခုဖြစ်ပါတယ်။အခြား OS တွေကိုလဲ သုံးလို့ရပါတယ် ဒါမဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဟာကိုရွေးပြတဲ့သဘောပါ ။linux ကို www.ubuntu.com မှာ အခမဲ့ ရယူနိုင်သလို သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ forum တွေကို လဲ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေး နိုင်ရပါမယ် ။Linux ကို သင်ကောင်းကောင်းသုံးတတ်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ သူက သင့်ကို hacker လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။
(6)hacker တယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို ထိမ်းသိမ်းသွားမယ်
ဘယ် hacker ကမှ ကိုယ့်ကို ကိုယ် ကျွန်တော် hacker ပါလို့ မိတ်ဆက်မလာပါဘူး။ မကြော်ငြာပါဘူး ပညာရှင်စိတ်ဓာတ် ရှိလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိမ်းသိမ်းတတ်ကြပါတယ် ။နေရာ တကာ မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားလိုစိတ်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မထိမ်းသိမ်းဘူး ဆိုရင်တော့ hacker ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
Hacker လမ်းကြောင်းပေါ်ကို လျှောက်မယ် ၊လေ့လာမှုတွေကို လဲ လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့မကြာခင်မှာ သင် HACKER တစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။
လေ့လာနိုင်သော အွန်လိုင်းပေါ်မှ HECKING SITE များ နှင့် OPEN SOURCE ဆိုဒ်များ
မှီငြမ်း - http://learnhackbasic.blogspot.com